Jona na Nnukwu Azụ̀ | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
Jehova Nweere Jona Ndidi
Ndị obodo Ninive dị n’Asiria na-eme ihe ọjọọ. Jehova gwara Jona onye amụma ka ọ gaa Ninive gwa ha ka ha kwụsị ihe ọjọọ ha na-eme. Ma, Jona hapụrụ ebe a sịrị ya gaa, gawa ebe ọzọ. Ọ banyere ụgbọ mmiri bu ndị mmadụ na-aga Tashish.
Ka ụgbọ ahụ nọ na-aga, oké ifufe malitere ife, ụjọ ejide ndị niile nọ n’ụgbọ ahụ. Ha bidoro kpewere chi ha, na-ajụ ya, sị: ‘Gịnị mere ihe a ji eme anyị?’ N’ikpeazụ, Jona gwara ha, sị: ‘Ọ bụ mụnwa kpatara ihe a na-emenụ. Jehova dunyere m ozi, mụ ahapụ ya na-agba ọsọ. Tụbanụ m n’ime oké osimiri a, ka oké ifufe a kwụsị inye unu nsogbu.’ Ndị na-akwọ ụgbọ ahụ jụrụ ịtụba ya ná mmiri ahụ, mana Jona nọgidere na-agwa ha ka ha tụba ya ná mmiri ka oké ifufe ahụ nwee ike ịkwụsị. Mgbe ha tụbara ya, oké ifufe ahụ kwụsịrị.
Jona chere na ya na-aga ịnwụ. Ka ọ nọ na-adakpu n’ala ala mmiri ahụ, o kpere ekpere. Jehova zitere otu nnukwu azụ̀ bịara loo Jona, ma Jona anwụghị. Ọ nọ n’afọ azụ̀ ahụ kpee ekpere gwa Jehova, sị: ‘M na-ekwe gị nkwa na m ga na-erubere gị isi mgbe niile.’ Jehova chebere Jona n’afọ azụ̀ ahụ ruokwa abalị atọ. Mgbe abalị atọ gachara, Jehova mere ka azụ̀ ahụ gbọpụta ya n’elu ala.
Ebe ọ bụ na Jehova echebela Jona, ọ̀ pụtara na ọ gaghịzi aga ozi ahụ o dunyere ya? Mba. Jehova gwara Jona ọzọ ka ọ gaa Ninive. Na nke ugbu a, Jona gara. Ọ gara zie ndị Ninive ihe Jehova ziri ya. Ọ gwara ha, sị: ‘A ga-ebibi Ninive n’ụbọchị iri anọ na-abịanụ.’ Ma, ihe a na-atụghị anya ya mere. Ndị Ninive gere ntị ma kwụsị ihe ọjọọ ha na-eme. Eze ndị Ninive gwara ndị obodo ya, sị: ‘Kpọkuonụ Chineke, onye ọ bụla kwụsịkwa ihe ọjọọ ọ na-eme. O nwere ike hapụzie ibibi anyị.’ Mgbe Jehova hụrụ na ndị Ninive echegharịala, o bibighịkwa ha.
Iwe were Jona na e bibighịzi ndị Ninive. Chebaragodị ihe a echiche: Jehova nweere Jona ndidi, meekwara ya ebere, mana, Jona emereghị ndị Ninive ebere. Kama, ọ pụrụ n’obodo ahụ, gaa nọrọ ọdụ n’okpuru otu osisi ogiri ụgba, na-eche ka ọ hụ ihe ga-emenụ. Osisi ahụ mechara kpọnwụọ, iwe ewee Jona. Jehova gwara Jona, sị: ‘Ị meteere osisi a ebere karịa ndị Ninive. Emeere m ha ebere, ọ bụ ya mere ebibighịzi m ha.’ Olee ihe Jehova ji ihe a na-akụziri anyị? Ọ bụ na ndị Ninive dị mkpa karịa osisi.
“Jehova . . . na-enwere unu ndidi n’ihi na ọ chọghị ka e bibie onye ọ bụla, kama ọ chọrọ ka mmadụ niile chegharịa.”—2 Pita 3:9
Ajụjụ: Olee ihe Jehova kụziiri Jona? Olee ihe ihe a mere Jona na-akụziri anyị?
Nwoke Dị Umeala n’Obi na Nwoke Obi Kara
Gịnị mere Chineke ji gwa Jona ka ọ gaa zie ndị ajọ omume nọ na Ninive ozi ọma?
Ihe Anyị Ga-amụta Gbasara Ebere Chineke
Gịnị mere ụjọ ji tụọ Jona mgbe Chineke gwara ya gaa zie ndị ajọ omume nọ na Ninive ozi ọma?
Ò nwetụla mgbe e nyere gị ọrụ ya adị gị ka ị gaghị arụli ya otú ahụ ọ dị Jona? Akụkọ Jona na-akụziri anyị ezigbo ihe gbasara otú Jehova si enwere anyị ndidi ma na-emere anyị ebere.
Jona Mụtara Ime Ebere
Olee otú akụkọ Jona nwere ike isi nyere anyị aka ka anyị chebara onwe anyị echiche?